Ukpono & onyinye
Gịnị bụ imewe nkwakọ ngwaahịa?
Site na mmepe akụ na ụba, ihe ndị mmadụ chọrọ maka ndụ ji nwayọọ nwayọọ na -abawanye elu, na nlebara anya n'ụdị ndị a na -adịkarị. Ụdị dị iche iche na -elezi anya na nkwakọ ngwaahịa ngwaahịa ha, ka emechara, asọmpi azụmahịa na -abawanye ...
Ihe okike BXL sonyere na ngosi ngosi ịma mma China nke 26
Na Mee 14, 2021, China Beauty Expo wepụtara ihe ngosi ụbọchị atọ na Shanghai New International Expo Center (Pudong). Dị ka otu n'ime ndị na -egosi ihe ngosi, BXL Creative Packaging bụ ndị ọbịa nke ihe ngosi ahụ weere ya. ...
Asọmpi WorldStar bụ otu n'ime mmemme dị mkpa nke World Packaging Organisation (WPO) na ọ bụ ihe nrịba ama zuru ụwa ọnụ na nkwakọ ngwaahịa. Kwa afọ, WPO na -amata ihe kachasị mma na nkwakọ ngwaahịa ọhụrụ sitere na gburugburu ụwa. Maka nkọwa ndị ọzọ gbasara World ...
BXL Creative meriri “China Patent Award” na “China Excellent Packaging Industry Award”.
Na 24th, Disemba 2020, China Packaging Federation 40 Conference Conference, 2020 Summit Industry Summit na Qionghai, hụ njedebe na -aga nke ọma na Boao. Mgbakọ nkwakọ ngwaahịa ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa 2020 bidoro ọmarịcha akụkọ na -ekerịta na "nchekwa gburugburu ebe obibi, akụ okirikiri, digi ...
Ihe okike BXL meriri anọ A'Design Awards
Onyinye A'Design bụ asọmpi imepụta mba ụwa zuru ụwa ọnụ. Ọ bụ asọmpi mba ụwa nke International Federation of Graphic Design Associations, ICOGRADA, na European Design Association, BEDA ghọtara. Ọ na -achọ igosipụta exce ...
BXL Creative meriri onyinye iF atọ
Mgbe ụbọchị atọ nke mkparịta ụka kpụ ọkụ n'ọnụ, nnwale na nyocha maka ntinye 7,298 sitere na mba 56, ndị ọkachamara imewe 78 sitere na mba 20 họpụtara ndị mmeri ikpeazụ na nturu ugo iF 2020. BXL Creative nwere ihe okike 3 ...
Ihe okike BXL meriri Pentawards International Creative Awards
N'ime "Pentawards Festival" site na 22 ruo 24 Septemba 2020, e kwuru okwu ndị bụ isi. Onye ama ama ama ama Stefan Sagmeister na onye nrụpụta akara & nkwakọ ngwaahịa Amazon USA Daniele Monti so na ha. Ha kesara nghọta ọhụrụ n'ime imewe ...
BXL Nkwakọ ngwaahịa okike Guizhou Ebinyela aka n'akwụkwọ!
N'afọ a, nke dabara na ncheta ụlọ ọrụ nke iri abụọ na otu, gọọmentị Guizhou kpọrọ BXL Creative ka ọ rụọ ụlọ nrụpụta na Guizhou iji kwalite mmepe akụ na ụba ebe ahụ. Dị ka ụlọ ọrụ edepụtara ekele, ọ bụ ọrụ dịịrị anyị inye aka na ...
BXL Creative Won 4 Design Design Awards na Asọmpi Mgbasa Ozi Mobius a
site na nchịkwa na 20-08-20
BXL Creative meriri "Onyinye Ọrụ Kachasị Mma" na "Gold" atọ maka imewe nkwakọ ngwaahịa na asọmpi Mobius Advertising Awards 2018, na -edobe ndekọ kachasị mma na afọ 20 na China. Ọ bụkwa naanị ụlọ ọrụ na-emeri ihe nrite na Eshia. Echiche nke imewe a sitere na iwu ụlọ ...
Na-alụ ọgụ Covid-19, BXL Creative nọ n'ọrụ!
site na nchịkwa na 20-02-10
Ememe oge opupu ihe ubi nke afọ a dị iche na nke gara aga. Site na ntiwapụ nke ọrịa coronavirus ọhụrụ na mberede, agha na -enweghị egbe na -amalite nwayọ! Maka onye ọ bụla, nke a bụ ezumike pụrụ iche. Covid-19 na-agbada, na-emetụta mmepụta na ndụ onye ọ bụla. A ...
kpọtụrụ ndị otu okike bxl!
Obi dị anyị ụtọ ịzaghachi arịrịọ gị na ajụjụ gị.